မိခင်နို့ကို စနစ်တကျ အပြင်မှာ ဘယ်လိုသိမ်းကြမလဲ ။ ။ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon Panel မှ ရေးသားသည်။3ပတ် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
မီးဖွားခွင့် ကုန်သွားလို့ ကလေး နို့စို့အရွယ်လေးမှာတင် အလုပ်ခွင်ပြန်ဝင်ရတာ ဖြစ်ဖြစ်၊ အပြင်သွားစရာရှိလို့ ကလေးနို့ဆာတဲ့အချိန်တိုင်း နို့မတိုက်နိုင်တာ ဖြစ်ဖြစ် နို့ကို ညှစ်ထုတ်ပြီး အပြင်မှာ သိမ်းခဲ့ကြတယ်မလား။ တချို့ အပြင်မှာ သိမ်းခဲ့တာကို သဘောကျပေမယ့်လည်း တချို့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကလေးကို နို့တိုက်လိုက်ရမှ ကျေနပ်တဲ့သူတွေလည်း ရှိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မိခင်နို့ တိုက်ကျွေးတာက ပြဿနာ မဟုတ်ပေမယ့် နို့ကို ညှစ်ထုတ်ပြီး အပြင်မှာ သိမ်းထားရင်တော့ သိထားဖို့လိုမယ့် ကိစ္စလေးတွေ ရှိလာပြီလေ။ ဘယ်လိုစနစ်တကျသိမ်းရမလဲ၊ ညှစ်ပြီးသား မိခင်နို့က အပြင်မှာ ဘယ်လောက်ခံမလဲ စတဲ့ မေးခွန်းတွေ မေမေတို့ခေါင်းထဲ တန်းစီနေမှာပေါ့
အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ညှစ်ပြီးသား မိခင်နို့တွေကို ဘာနဲ့သိမ်းကြမလဲ။
ညှစ်ပြီးသားမိခင်နို့ကို ဘာနဲ့ထည့်သိမ်းကြမလဲဆိုတာ အရေးအကြီးဆုံး အချက်တစ်ခုပါ။ ထည့်လို့ရတဲ့ တွေ့ရာ ပစ္စည်းတစ်ခုခုနဲ့ သိမ်းလို့မရတဲ့အတွက် မိခင်နို့သိမ်းဖို့ ဆိုပြီး သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ ပလတ်စတစ်တွေ ဘူးတွေကို သုံးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်သုံးတဲ့ ပလတ်စတစ်ဘူးတွေ အိတ်တွေမှာ BPA ဓာတုပစ္စည်း free ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးပါဖို့ တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဖန်ပုလင်းနဲ့ သိမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ မကွဲအောင် ဂရုစိုက်ဖို့၊ သုံးပြီးသား ဖန်ပုလင်းကို သေချာ သန့်စင်အောင်ပြန်ဆေးပြီး နေလှန်းအခြောက်ခံဖို့ကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေထဲက တစ်ချက်ပါ။
ညှစ်ပြီးသား မိခင်နို့တွေက ဘယ်လောက်ခံတတ်လဲ။
• အခန်းအပူချိန် ( ၂၅ ဒီဂရီ ) လောက်မှာဆိုရင် ညှစ်ပြီးသားနို့က ၄ နာရီလောက်အထိ ခံတတ်ပါတယ်။
• ရေခဲသေတ္တာ ( ၄ ဒီဂရီစင်တီဂရီတ်) လောက်မှာဆိုရင်တော့ ၄ ရက်လောက်အထိခံပါတယ်။
• ရေခဲတဲ့အကန့်ထဲ ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ၆လကနေ ၁၂လလောက်အထိ ခံပါတယ်။
စနစ်ကျတဲ့ မိခင်နို့သိမ်းနည်းတစ်ခုမှာ ဘာတွေပါသင့်သလဲ။
• နို့ကို သိမ်းထားတဲ့နေရာမှာ မိခင်နို့သိမ်းဖို့အတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ BPA free ဖြစ်တဲ့ ပလတ်စတစ်ဘူးတွေ၊ အိတ်တွေ နဲ့ မိခင်နို့ကို သိမ်းထားဖို့ပါ။
• နောက်ပြီး ကိုယ်သိမ်းထားတဲ့ နေရာရဲ့ အပူချိန်ကိုလိုက်ပြီး နို့ရဲ့ တာရှည်ခံမှု ကိုသိဖို့လိုပါတယ်။
• သိမ်းထားတဲ့ ဘူးဖြစ်ဖြစ် အိတ်ဖြစ်ဖြစ်မှာ စသိမ်းထားတဲ့ အချိန်နေ့ရက်နဲ့ ကလေးနာမည်လေးတွေကို သေချာစာရင်းလုပ်ထားဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။
• နောက်တစ်ချက် နို့ဘူးနဲ့သိမ်းထားရင် ချိုလိမ်တပ်မထားဘဲ အဖုံးလေးနဲ့ပဲ သိမ်းထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
သိမ်းထားတဲ့ နို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ။
ဘယ်နို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ ချဉ်တဲ့အနံ့တွေ ထွက်လာတတ်ကြတာ အားလုံးသိမှာပါ။ ဒီတော့ ကိုယ်သိမ်းထားတဲ့ နို့လေးကချဉ်တဲ့ အနံ့ထွက်လာပြီဆိုရင် ကလေးကို မတိုက်တော့တာအကောင်းဆုံးပါ။
မနေ့ကညှစ်ထားတဲ့ နို့နဲ့ ဒီနေ့ညှစ်ထားတဲ့နို့ရောလို့ရလား။
မနက်က ညှစ်ထားတဲ့နို့နဲ့ ညနေညှစ်ထားတဲ့နို့ကို ရောလိုက်လို့ရပေမယ့် ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပြီး အအေးခံထားတဲ့နို့နဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ညှစ်ထားတဲ့နို့ကို ရောတာမျိုးတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။
ညှစ်ပြီးသိမ်းထားတဲ့နို့နဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တိုက်တဲ့နို့မှာအာနိသင် ကွာခြားတာမျိုးရှိလား။
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တိုက်တဲ့ မိခင်နို့က အကောင်းဆုံးဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ နို့ကိုညှစ်ပြီးသိမ်းထားတာနဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်နို့က အာနိသင် ကွာခြားမှု သိပ်မရှိဘူးဆိုပေမယ့် အကျိုးများမယ့် မိခင်နို့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကို တိုက်နိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။
ရေးသားသူ- Dr Thin [email protected]
Should breast milk be stored in bags or in bottles? https://www.breastfeedingbasics.com/qa/breastmilk-storage Accessed date 29.11.2019
Proper storage and preparation of breast milk https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm Accessed date 29.11.2019
How To Tell If Breast Milk Is Bad? Signs And Tips To Prevent https://www.momjunction.com/articles/how-to-tell-if-breast-milk-is-bad-spoil-signs-tips_00738355/ Accessed date 29.11.2019
Should you pump or breastfeed? https://www.medicalnewstoday.com/articles/322839 Accessed date 29.11.2019
Breast milk storage: Do’s and don’ts https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/in-depth/breast-milk-storage/art-20046350 Accessed date 29.11.2019